No soo noqoshada caadiga ah, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
(K) ku soo laabashada sidii caadiga ahayd
Markii aan ka saaray qurxinta Kirismaska, oo aan uxiro oo aan dib ugu celiyo meeshoodii hore, ayaan nafteyda ku idhi ugu dambayntii waan ku noqon karaa caadi. Wax kasta oo ay caadi noqon karaan. Mar qof ayaa ii sheegay in caadi ahaanshuhu uu ahaa kaliya howlihi ku saabsan qalajiyaha dharka waxaanna ka shakin karaa dadka intiisa badani waxay u malaynayaan inay run tahay
Ma waxaan dib ugu laabanaa sidii caadiga ahayd ka dib kirismaska? Miyaynu ku noqon karnaa jidkii aan ku jirnay ka dib markii aan la kulannay Ciise? Dhalashadiisa ayaa ina taabatay sharaftii uu Eebbe ka mid noqday isagoo na siinaya sharaftiisa iyo booskiisa aabaha si aan ugu noolaano aadanaha oo kale. Wuxuu cunay, wax cabbay oo seexday (Filiboy 2). Wuxuu naftiisa ka dhigay ilmo nugul, oo aan caawin karin kaas oo u baahnaa waalidkiis inay si amaan ah ugu hagaan ilmanimada.
Intii lagu gudajiray hawshiisii ​​wuxuu ina siiyay fahanka awooda uu ku haystay bogsashada dadka, xasilinta badda duufaanta, oo dadka badan siisa cunno iyo xitaa kuwa dhintay. Wuxuu kaloo na tusay naftiisa, jacaylkiisa isagoo la kulmaya dad loo diiday bulshada oo samafal ah.
Way na taabatay markii aan ku soconno jidkiisii ​​dhibka, kaas oo uu si geesinimo iyo kalsooni leh ugu qaatay aabihiis, ilaa mustaqbalkiisa, dhimashad iskutallaabta. Indhahayga ayaa ku dhaca markaan ka fekero daryeelka hooyadiisa iyo u ducaynta cafiska kuwa mas'uul ka ah dhimashadiisa. Wuxuu u soo diray Ruuxa Quduuska ah inuu na dhiirrigaliyo, caawiyo, oo na dhiirrigeliyo weligiis. Isagu keligiis iskama tegin oo maalin kasta joogitaankiisa ayaa inagu dhiirrigeliya oo nagu sii xoogaysanaya. Ciise wuxuu noogu yeerayaa nafsadeena sida aan nahay, laakiin isagu ma doonayo inuu nagu sii joogo. Hawlaha Ruuxa Quduuska ahi waa inuu ina abuuro abuur cusub. Si ka duwan sidii aan ahaan jirnay annaga ayaa isaga cusboonaysiinay. 2 Korintos 5,17 waxay leedahay: "Sidaa darteed: haddii qof Masiixa ku jiro, waa abuur cusub; Dadkii hore way dhammaadeen, oo bal eega, wax cusubi waa noqdeen.
Waan awoodnaa - dad badanuna sidaas oo kale yeeli karaan - inaan sii wadno fakirka iyo noolaanshaha ka dib markaan maqalno sheekada Ciise noloshiisa rajo-siinta. Markaan tan sameyno, waxaan u diidi karnaa inuu galo qaybta ugu hooseysa ee wadnahaheena, sida ugu badan ee aan ugu dhow nahay inaan iska ilaalino qof aan is baranno, saaxiib, ama xitaa lammaaneheenna ka fogeynno fikradaheena iyo dareenkeenna gudaha. Waa suurtogal in la xannibo Ruuxa Quduuska ah oo lagu hayo fogaan fog. Wuu u oggol yahay halkii uu naftiisa ku soo rogi lahaa.
Laakiin taladii Bawlos ee ku jirta Rooma 12,2 ayaa ah inaan u oggolaanno inuu beddelo annaga oo cusboonaysiinna maskaxdayada. Tani waxay dhici kartaa oo keliya haddii aan Ilaah siino nolosheena oo dhan: hurdadayada, cunista, shaqada, nolol maalmeedkayada. Helitaanka waxa Ilaahay noo sameeyo waa waxa ugu fiican ee aan ku sameyn karno isaga. Haddii aan fiiro gaar ah siinno, waxaa laga beddeli doonaa xagga gudaha. Ma ahan sida bulshada nagu xeeran ee isku dayeysa inay na hoos u dhigto heerka aan qaan gaarin, laakiin Eebbe wuxuu naga soo bixiyaa waxa ugu wanaagsan oo kobcaya innaga.
Haddii aan badalno nolosheena Masiixa, waxaan u dhaqmi doonnaa sida Peter iyo Yooxanaa, kuwa yaabay taliyayaasha, odayaasha, aqoonyahanada Yeruusaalem, iyo dadka. Raggaas fudud waxay noqdeen geesiyaal iyo madax adkeeyay iimaanka maxaa yeelay waxay ahaayeen kuwa xagga ruuxa la ah Ciise (Falimaha Rasuullada 4). Iyaga iyo innaga, markaan la xiriirno nimcadiisa, uma soo noqon karno sidii caadiga ahayd.